The Ab Presents Nepal » अब भारतबाट किन्नु पर्ने बिजुलिमा रोक लगाउँदै कुलमान: सलाम छ कुलमानलाई सम्मान स्वोरुप सियर गरौँं !
अब भारतबाट किन्नु पर्ने बिजुलिमा रोक लगाउँदै कुलमान: सलाम छ कुलमानलाई सम्मान स्वोरुप सियर गरौँं !
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले नेपाललाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाएको धेरै भएको छैन । लगभग ३ वर्ष भैसकेको छ । तर, यतिका वर्ष बिति सक्दा पनि नेपालीले भारत बाट आयात हुने विजुलिका बारेमा प्रश्न गर्न छोडेका छैनन ।यस्को उत्तर कुलमानले ल्याएका छन । ३ वर्षको लोड्सेडिङ्ग मुक्त देश नेपालले भारत बाट पनि विद्युत आयत गर्ने गर्थ्यो । यो वर्ष भनेे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालमै उत्पादन गरेको बिजुली प्रदान गर्ने भएको छ । नेपालीले बिजुली राम्रो सगँ प्रयोग गर्न जानेको र निर्धक्क भएर प्रयोग
गर्दै आएको देखेर कुलमान घिसिङ खुसिले गदगद भएका छन । यहि सिकाउनु उनको मुख्य लक्ष्य रहेको थियो । उनको मिहेनतले रङ्ग ल्याएको छ र त्यही रङ्गमा सारा नेपालीले होलि खेल्न पाएका छन । यसले यो पनि जनाउँछ कि मानिसहरु अझै सचेत बन्दै गएका छन ।नेपाली भूमी नै बिजुली को उत्पादन बढेको छ । यसै कारणले गर्दा कुलमानले सारा नेपालीलाई मज्जाले अझै बढी बिजुली प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन । यो त पक्का नै भैसक्यो कि नेपालमा अब बत्ती जाने छैन । त्यति मात्र नभएर अब भारत बाट आयत हुने बिजुलिको समेत रोक हुने पक्का पक्की भएको छ ।
यो समाचार सबैका लागि जति राम्रो छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण पनि छ । यति मात्र कहाँ हो र, नेपालमा भएका उद्योग धन्दाका लागि समेत कुलमानले समर्पित लाइनहरु प्रदान गर्ने भएका छन । देशको विकास गर्न एकजना मात्र लागि परेर हुँदैन । कुलमान जस्ता बुद्धिमानी व्यक्तिलाई सलाम छ ।लोड्सेडिङ्ग त नेपालमा एउटा संस्कृति जस्तै भैसकेको थियो । यस्तो रितिलाई परिवर्तन गर्ने कुलमानका लागि एक सियर त गर्नै पर्छ । सक्दो सियर गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला । सलाम कुलमान घिसिङलाई ।